Ihotele yasekhaya-La Retraite du Lac Wallace
Saint-Herménégilde, Quebec, Canada
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHôtel À La Maison
I-chalet encinci kumda wechibi, kwinkcazo ecocekileyo yegama elithi chalet!
Umhlaba othe tyaba, ulwandle, umbono, yonke into ikhona ukuqinisekisa umzuzu oyimpumelelo wokuphumla. Kwiintsuku ezishushu, i-terrace egqunyiweyo kunye ne-air conditioning iya kukuvuyisa. Indawo yomlilo nayo icwangciswe ngeengokuhlwa zasehlotyeni.
Le chalet ilungele usapho okanye abahlobo abafuna ukuyithatha lula kwaye bavuke kwisandi sokucula kweentaka!
Umbono ovulekileyo kumgangatho ophantsi, obandakanya igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela. Sikwanayo ne-air conditioning!
Igumbi elingaphantsi linamagumbi okulala amabini kunye negumbi losapho, elihlala ibhedi eyongezelelweyo kunye newasha / indawo yokomisa.
Kodwa eyona nto igqwesileyo kulo mboniso ngokungathandabuzekiyo yile thafa inkulu, ilungele imidlalo okanye ngorhatya ecaleni komlilo. Uza kufumana i-terrace encinci apho, ekupheleni, kufuphi namanzi, okuya kukuvumela ukuba uthande umhlaba okanye ubeke iliso kubantwana abahlambayo, kulo lonke uxolo lwengqondo.
Hlala kamnandi echibini!
Nceda uqaphele ukuba sibonelela nge-smart TV. Kwakhona, ukusebenzisa iNetflix, kufuneka ufake igama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
IMount Hereford, enye yezona ncopho ziphakamileyo kwiilokishi zaseMpuma, inika iimbono eziphefumlayo kwiikhilomitha ngeenxa zonke.
Unxweme loluntu lubekwe kwindawo enoxolo kakhulu ecaleni kweChemin Père-Roy.
Umasipala waseSaint-Herménégilde unendawo etyebileyo yabantu abathanda ukufunda ngeenyoka.
Umgxobhozo weDuquette ulikhaya kwiintlobo ezininzi zeentaka, ngakumbi entwasahlobo nasekwindla.
I-Forêt Hereford ibonelela ngeendlela ezininzi eziphawulweyo ukuze abemi banyuke iMount Hereford.
Yiza uzonwabele umoya omtsha, iintaka kunye neendawo ezintle zomhlaba. Le ndawo yendalo yomgangatho ongaqhelekanga ikunika ngaphezulu kwe-10 km yeendlela zokuthatha ithuba lobutyebi beendawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Hôtel À La Maison
Izimvo eziyi-7 670
Ndiyakwazi ukuphendula imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho ngomyalezo wakwa-Airbnb okanye ngomnxeba.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R6893
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Herménégilde